Sida Loogu Kala Sooco Xaqiiqa Aaladda Gawaarida
Qaar badan oo ka mid ah waxa loogu yeero qaybaha asalka ah ee GM ee Qaybaha Awooda Magaalada, suuqa iyo khadka tooska ah waa been abuur. Lacagta godku ma dhaho, qalab kasta oo been abuur ah ayaa lagu rakibay gaariga, waxaa jiri doona shil badbaado! Waxa kale oo jira qalabyo badan oo ah re "reincarnation" oo ah qalabka gawaarida duugga ah. Halkaas ...
Mabda 'Sifeeyaha Shidaalka Iyo Dayactirka Siiraha Shidaalka
Waa muhiim in la nadiifiyo shaandhada shidaalka. Sifeeyaha shidaalka wuxuu kuxiran yahay dhuumaha udhaxeeya bamka shidaalka iyo marinka jirka jirka. Shaqada shaandhada shidaalku waa inay ka saarto xabagta birta ah, siigada iyo wasakhda kale ee adag ee ku jira shidaalka, inay ka hortagto nidaamka shidaalka inuu ka xirmo ...
Waxqabadka iyo Mabda'a Shaqada ee Mashiinka Gawaarida Gawaarida
Mashiinka shidaalka wuxuu kaalin aan la beddeli karin ka qaataa howlaha mishiinka. Markaa haddii cadaadiska saliida ee gaaska ku yar yahay, astaamahee ayaa soo muuqan doona? Immisa ayey tahay heerka cadaadiska saliidda ee batroolku caadi yahay? Calaamadaha cadaadiska saliida mashiinka ee aan ku filnayn ee bamka baatroolka Hadii cadaadiska shidaalka ee gaaska ...
NAGU SOO KOOBAN HALKAN
Khariidadda boggaBamka Biyaha ee Mercedes-Benz, Gawaarida Mercedes-Benz Gawaarida Biyaha, Mashiinka Mashiinka CUMMINS, Mashiinka Biyaha Cummins, Bamka Biyaha, Mashiinka Mashiinka Mercedes-Benz,
Yongʻan Industry Park, Xianju County, Taizhou, Shiinaha